सिमामा राजधानी तोक्नु राष्ट्रियताका लागि खतरा, स्थायी राजधानी दाङ हुन्छ – Janaubhar
सिमामा राजधानी तोक्नु राष्ट्रियताका लागि खतरा, स्थायी राजधानी दाङ हुन्छ
प्रकाशित मितिः बुधबार, माघ १०, २०७४ | 732 Views ||
प्रदेश सभा सदस्य एवं नेता, नेकपा माओवादी केन्द्र
नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालय सदस्य एवं प्रदेश सभा सदस्य कुलप्रसाद केसी ‘सोनाम’ सात वटामध्ये पाँच वटा प्रदेशको अस्थायी मुकाम भारतीय सिमा नजिक तोकिनु राष्ट्रियताका लागि खतरा भएको बताउँछन् । देउवा सरकारले रिमोट कन्ट्रोलको आदेशमा अस्थायी मुकामहरु सिमा नजिक तोकेको उनको आरोप छ । प्रदेश सरकार, प्रदेश राजधानी, पार्टी एकतालगायतका विषयमा केन्द्रित भएर नौलो जनउभार साप्ताहिकका सह–सम्पादक पाण्डव शर्माले गरेको कुराकानी । –सम्पादक
तपाईहरुको गठबन्धन शक्ति नेकपा एमालेले ५ नं प्रदेशमा संसदीय दलको नेता चयन गरिसक्यो । तपाईहरुले कहिले चयन गर्नुहुन्छ ?
हामी पनि ५ नं प्रदेशमा संसदीय दलको नेता गर्ने तयारीमा छौं । अब राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया साथ साथै हुन्छ । यही अबसरमा हामीले मुख्य सचेतक, सचेतक पनि चयन हुन्छ । अहिले हामी आन्तरिक छलफलमा छौं । यस विषयमा पार्टीभित्र कुराकानी भइरहेको छ ।
हामीले ५ नं प्रदेश संसदीय दलको पहिलो बैठक दाङमा राख्दैछौं । पार्टीको बैठक पनि बस्छ । यसका लागि पार्टीका प्रदेश इञ्चार्ज वर्षमान पुनसहितका नेताहरु दाङ आउने तयारीमा हुनुहुन्छ ।
संसदीय दलको नेता को बन्छ ?
यो विषय पहिले नै टुंगिसकेको हो । निर्वाचन हुनुभन्दा पहिले हाम्रो पार्टीको वुटवलमा प्रदेश बैठक बसेको थियो । प्रदेश बैठकले यो प्रदेशमा मलाई मुख्यमन्त्री सहित निर्वाचनमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । यो प्रदेशमा समग्र नेतृत्व मैले गरेका कारण स्वभाविक रुपमा संसदीय दलको नेता पनि म हुने कुरा भयो । यसमा हाम्रो पार्टी भित्र कुनै पनि फरक मत छैन ।
निर्वाचनमा मुख्यमन्त्रीको रुपमा पार्टीले अगाडि बढाएको भनेर भन्नुभएको छ । के तपाई मुख्यमन्त्री बन्न थाल्नुभएको हो ?
हाम्रो पार्टीले निर्वाचनपूर्व प्रदेशको नेतृत्व गर्ने गरी मलाई अगाडि बढाएको हो । स्वभाविक रुपमा पार्टीको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले मुख्यमन्त्रीमा मेरो दावी रहन्छ । हाम्रो पार्टीको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार म नै हो ।
तपाईको पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले त शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा बचन दिइसक्नुभएको छ रे नि ?
अध्यक्षले मलाई पनि मुख्यमन्त्रीको बचन दिनुभएको छ । बचन मात्र होइन मेरो पार्टीको प्रदेश बैठकले लिखितरुपमा मलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार भनेर निर्णय गरिसकेको छ । शंकरजीलाई त कुनै लिखित सहमति भएको छैन नि । राजनीतिमा बचन भन्ने कुरा त्यति महत्वपूर्ण कुरा होइन । मुख्य कुरा निर्णय हो ।
त्यसो भए तपाई शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा स्वीकार गर्नुहुँदैन हैन ?
शंकरजी र मेरो व्यक्तिगत कुरा भएन । पार्टीको निर्णय र गठबन्धनको सहमति मुख्य कुरा हो । हाम्रो कार्यदल बनेको छ । कार्यदलले कुन पार्टी कुन ठाउँमा मुख्यमन्त्री उठाउने भनेर निर्णय गर्छ ।
स्वभाविक रुपमा पाँच नं. क्षेत्र माओवादीको जनयुद्धको आधार क्षेत्र भएकाले पनि हाम्रो दावी रहन्छ । यसको अर्थ माओवादीले मुख्यमन्त्री छोड्ने भन्ने होइन । ६ नं. प्रदेशमा एमालेका साथीहरुले मुख्यमन्त्री नछोड्ने भन्नुभएको छ । यदि ६ नं. प्रदेश एमालेले पायो भने ५ नं प्रदेश माओवादीले पाउँछ नि । त्यसैले कुनै व्यक्तिलाई निर्विकल्प भन्ने हुँदैन ।
हाम्रो पार्टी र एमालेबीच के समझदारी हुन्छ, यसको आधारमा हुन्छ । दुई पार्टीले म र शंकरजीलाई मात्र केन्द्रविन्दूमा राखेर निर्णय गर्ने कुरा पनि भएन । अन्य प्रदेशका साथीहरु पनि हुनुहुन्छ । सबै प्रदेशमा मिलाउँदा पाँच नं प्रदेशमा जसलाई पनि नेतृत्व लिने अबसर प्राप्त हुन सक्छ । त्यसले यो विषयलाई कुनै व्यक्ति केन्द्रितभन्दा समग्र वाम गठबन्धनको निर्णयलाई हेर्नुपर्छ ।
तपाईहरुले पाँच नं प्रदेशको अस्थायी मुकाम दाङ तोक्नुपर्छ भन्नुभएको थियो तर, सरकारले रुपन्देहीमा तोकेको छ । यसमा तपाईहरुको धारणा के हो ?
हामीले यस विषयमा धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छौं । यो निर्णय सरकारको निकै लाचारीपनको पराकाष्ठा हो । सात वटामध्ये पाँच वटा प्रदेशको अस्थायी मुकाम भारतीय सिमा नजिक तोक्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।
हामीले प्रदेश सभाबाट पाँच नं प्रदेशको राजधानी दाङ तोक्छौं । अहिले रिमोट कन्ट्रोलले अस्थायी मुकामहरु भारतीय सिमाना नजिक तान्यो । नेपाली जनताले यसमा प्रतिरोध गर्छन्, हामी तत्काल सर्वदलीय बैठकमा निर्णय गराएरै प्रदेश सभाबाट सीमामा तोकिएको राजधानी फिर्ता गर्छौं । आवश्यकता र उपर्युक्त अबस्था नहुँदा नहुँदै शक्तिकेन्द्रको इच्छामा सीमामा अस्थायी मुकाम तोकिएको छ ।
५ नं. प्रदेशमा बुटवललाई पर्यटनको केन्द्र, नेपालगञ्जलाई आर्थिक केन्द्र र दाङलाई प्रशासनिक केन्द्र बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको आधिकारिक भनाई हो ।
रुपन्देहीमा अस्थायी मुकाम तोक्न त्यहाँका जनताले पनि चाहेका थिएनन् । लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध धार्मिक केन्द्र हो । यसको आफ्नै ढंगले विकास भइरहेको छ । रुपन्देहीलाई अस्थायी मुकाम चाहिएकै छैन, यो बाह््य शक्ति केन्द्रलाई चाहिएको हो ।
अब कसरी राजधानी दाङ ल्याउनुहुन्छ ?
यो विषय राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हो । अब साँच्चिकै मुलुकको समृद्धि चाहने हो भने हामीले राष्ट्रियताको रक्षा गर्नुपर्छ । यो विषय कुनै भूगोल वा ठाउँको विषय भन्दा पनि समग्र राष्ट्रियताको विषय हो । राष्ट्रियताको लडाईमा सबै दलहरु एक हुनैपर्छ । बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध केन्द्र भएकाले त्यसलाई त्यही ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ । अहिले संसारको ध्यान लुम्बिनीमा केन्द्रित भएको छ । त्यति राम्रो पर्यटकीय ठाउँमा राजधानी राख्दा त्यसको कुरुपता बढ्छ ।
अर्को कुरा हामीले यो प्रदेशको समग्र विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसका लागि सबै क्षेत्रलाई समानुपातिक ढंगले विकास गर्न जरुरी छ । दाङ पूर्व नवलपरासीदेखि पश्चिम बर्दिया र उत्तरमा हुकाम, मैकोटसम्मको केन्द्रविन्दु दाङ हो । हामी कुनै हचुवाको भरमा बोलेका छैनौं । तथ्यहरुलाई आधार मान्ने हो भने पनि पाँच नं प्रदेशको राजधानी दाङ नै हुन्छ ।
अहिले माओवादी र एमालेबीच पार्टी एकताको प्रक्रिया शुरु भएको छ । अहिले के विषयमा छलफल केन्द्रित भएको छ ?
पार्टी एकता भन्ने कुरा रातारात हुने विषय होइन । पार्टी एकताका लागि हामीले विचार र संगठन मिलाउनुपर्छ । संगठन भन्दा पनि विचार महत्वपूर्ण कुरा हो । विचार मिलेको खण्डमा पार्टी एकता हुन्छ । हामी अहिले दुई पार्टीबीच आगामी कार्यदिशा कस्तो हुने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । दुई वटा कार्यदल बनेका छन् । मुख्य नेतृत्वहरुबीच पनि कुरा भइरहेको छ । कार्यदलको सिफारिश र नेतृत्वहरुको सहमति भएपछि पार्टी एकता घोषणा हुन्छ । आधारभूत रुपमा विचार कस्तो निर्माण भन्ने विषयमा नै अहिले हामी केन्द्रित भएका छौं ।
तपाईका स्तरका नेताहरुले अहिलेसम्म धेरै पटक सत्ताको स्वाद चाखिसक्नुभएको छ । तपाई पहिलो पटक प्रदेश सभामा निर्वाचित हुनुभयो । कस्तो अनुभूति भएको छ ?
यो मेरो व्यक्तिको प्रश्न मात्र होइन । समग्र नेपाली क्रान्तिको कुरा छ । सत्ताको प्रयोग हाम्रो पार्टीले प्रयोग गर्न थालेको एक दशक भए पनि म पहिलो पटक जाँदै छु । यसले मेरो अग्नी परिक्षा पनि लिने छ । म जहाँ गए पनि मुख्य त जनता र क्रान्तिप्रति प्रतिवद्ध हुन्छ । अरु कुरा मैले व्यवहारमा देखाउने छु ।
Prevराष्ट्रिय सभाका लागि यी हुन् माओवादी उम्मेदवार
Nextफुर्तिलो रहने र थकाइ मेटाउने यी हुन् खानेकुरा